Ukubuka ulwandle, i-4 Ocean Street - i-air conditioned Luxury kunye neendawo ezintle ezijonge ulwandle - I-Airbnb
Ukubuka ulwandle, i-4 Ocean Street - i-air conditioned Luxury kunye neendawo ezintle ezijonge ulwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguO'Meara Property
Indlu enamagumbi okulala amathathu anomatshini okhupha umoya obandayo elwandle nemigxobhozo yesanti, ekwindawo ethe cwaka yaseFishermans Bay. Hlala phantsi wonwabele izandi zolwandle, uqubhe kunye nabantwana elunxwemeni lwasekuhlaleni, wonwabele idwala
Khawucinge nje uhleli umamele amaza uze ubone ulwandle olukwiqondo le-180. Kwiiyure nje eziyi-2 ukusuka eSydney neyure eyi-1 ukusuka eNewcastle, le ndawo intle iselunxwemeni lwamanzi kwidolophu ethuleyo engaselunxwemeni lweFisherman 's Bay nemizuzu nje eyi- ukusuka eAnna Bay enolwandle olugqwesileyo lokusefa olufumaneka ePort Stephens.
Bukela iminenga nee-dolphins zisuka e-verandah uze wonwabele ii-sunsets ezisemagqabini. Ininzi into onokuyenza: ukuhamba kwiPaki Yelizwe ukuya kumalwandle asecaleni, intlanzi yomkhonto kunye ne-snorkel ematyeni phambi kwendlu, ukusefa elunxwemeni olukufutshane lweBirubi, ukuqubha kunye nabantwana elunxwemeni lwasekuhlaleni (ukuhamba imizuzu eyi-5), okanye ukuqalisa isikhephe sakho ukusuka kwindawo enesikhephe esincinci elunxwemeni olukufutshane (iimitha eziyi-200).
Ukulala kamnandi 8, indlu inomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kumgangatho ongasentla apho kukho amagumbi amathathu okulala, (uMfundisi ubonakala elwandle kunye nendawo yokuhlala), iindawo ezi-2 zokuhlala ezinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, ikhitshi elinomatshini wokuhlamba izitya neoveni, umatshini wekofu weNespresso, indawo yokuhlamba iimpahla enomatshini wokuhlamba nowokomisa impahla, iyadi (ayibiyelwanga), ibhafu ye-spa kwigumbi lokuhlambela eliphambili, inyama yerhasi kunye negaraji ekulawulwa kude kabini.
Ukusebenziseka kwegumbi lokulala: -
Igumbi lokulala 1 - Ibhedi enkulu + ibhalkhoni + umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu + nokujongwa kolwandle
Igumbi lokulala 2 - Ibhedi enkulu + umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Igumbi lokulala 3 - 2 x iBunks enye + umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Izinto zebhedi: -
Le ndlu ayiquki amashiti okanye iitawuli, nceda uze nezakho okanye uqhakamshelane nathi ukuze ulungiselele inkonzo yokuqesha amashiti. Le nkonzo yamashiti ixabisa kuxhomekeka kubude bexesha oza kulihlala, amaxabiso aqala kwi- $ 28 kwi-King/i-Queen/i-Double pack kunye ne- $ 24 kwipakethi enye.
Izinto zebhedi zinamashiti ayi-2, imiqamelo, iitawuli zokuhlamba, iibhafu, iitawuli zezandla kunye neetawuli zeti (iitawuli zaselwandle ze-BYO). Le ndlu inemiqamelo, iingubo nezinto ezigqamileyo.
Amanqaku Endlu: Izilwanyana zasekhaya azivumelekanga kule ndlu.
Le ndlu inayo i-Wi-fi.
Ngokubhatala ngokubhukisha, wena kunye nazo zonke iindwendwe ezihlalayo niza kuthobela Ikhowudi Yokuziphatha Indawo Yokuhlala Ixesha Elifutshane enokujongwa phantsi kwethebhu Yenkcazelo Yondwendwe kwiwebhusayithi yethu okanye ngelinki eza kuthunyelwa kuwe kwi-imeyile yakho yokuqinisekisa ukubhukisha.
Le ndlu iza kusetyenziswa njengendawo yokuqeshisa yeholide kuphela, akufunekanga isetyenziswe njengendawo yokuhlala engasetyenziswayo. Nceda ujonge Imimiselo nemiqathango yethu efumaneka kwithebhu Yenkcazelo Yondwendwe kwiwebhusayithi yethu.
Ziindwendwe ezihlala kuloo ndlu kuphela ezivumelekileyo ukuba zibe khona. Ukuba unqwenela ukuba neendwendwe ezongezelelekileyo (oku kuquka iindwendwe zosuku) ukongezelela kwiindwendwe ezibhukishileyo, kufuneka usicebise ngokubhala ngaphambi kokuhlala kwakho kwaye uqinisekise ukuba ufumana imvume ebhaliweyo ukuba indlu iyakuvumela oku.
Ukuba wena okanye naluphi na olunye undwendwe ufumana isilumkiso ngengxolo egqithisileyo okanye iindwendwe ezongezelelekileyo, usenokucelwa ukuba UPHUME ENDLWINI NGOKUKHAWULEZA ungakhange ubuyiselwe imali. Ingxolo ngaphandle kwendlu ayivumelekanga phakathi ko-10:00pm no-8: 00am.
Le ndlu ivunyelwe ukuba ibe nendawo yokuhlala yeholide kuphela, akukho matrasi ongezelelekileyo, iintente, iikharaveni okanye iimoto ezingakumbi kunendawo yokuhlala evumelekileyo.
Izinto eziqukiweyo - inyama eyojiweyo yegesi, ukujongwa kwamanzi, umatshini wekofu weNespresso, ibhafu ye-spa kwigumbi lokuhlambela eliphambili.
Inkonzo yongxamiseko yasemva kweyure iyafumaneka emini nasebusuku ngexesha lokuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- O'Meara Property
Ipropathi ye-O'Meara ibekwe kwindawo entle entliziyweni yeNelson Bay inolawulo lwepropathi enobuhlobo ejolise ekwenzeni ukubhukisha kwakho kube lula kwaye iholide yakho iphumle kwaye yonwabe kangangoko. Zonke iindwendwe ziyabizwa xa ukubhukisha kwazo kuqinisekisiwe kwaye zonke iinkqubo zichazwe. iofisi yethu ivuliwe ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo 9am ukuya 5pm. Iindwendwe ziqokelela izitshixo zazo zepropati ezihlala kuyo kwindawo yethu yolwamkelo, ukuba ukufika kusemva kweeyure zomsebenzi sinebhokisi yokuqokelela isitshixo sasemva kweyure kwiofisi yethu yeendwendwe ezifuna le nkonzo.
Ipropathi ye-O'Meara ibekwe kwindawo entle entliziyweni yeNelson Bay inolawulo lwepropathi enobuhlobo ejolise ekwenzeni ukubhukisha kwakho kube lula kwaye iholide yakho iphumle kwa…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-480